धार्मिक मान्यता अनुसार बिहिबारका दिनमा जन्मेका मानिसको भाग्य कस्तो ? जानकारी लिनुहोस – Khabar Silo
ज्योतिष शास्त्रमा जन्मबार अनुसार पनि मानिसको भाग्यमा असर गर्ने बताइन्छ । जन्म समय अनुसार नै मानिसको भूत, वर्तमान र भविष्यका बारेमा फलादेश गरिन्छ । आज विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ-
Posted on October 15, 2020 October 15, 2020 Author khabar silo